Shina: Fandraketana Ny Tena Anarana Ho An’ny Fandefasana Hafatra Eo Noho Eo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2017 2:56 GMT
(Fanamarihana: navoaka tamin'ny Jolay 2005 ity lahatsoratra ity)
Ny fandraketana anarana indray no lohahevitra nivaivay ho an'ireo Shinoa blaogera nanomboka tamin'ny nanakatonana ny ankamaroan'ireo BBS -n'ireo kolejy goavana, na noferan'ny governemanta ny fidirana aminy tamin'ny volana Martsa. Mieritreritra ny olona amin'ny ankapobeny fa, ireo blaogera no tokony ho voalohany hanoratra ny anarany raha toa iditra hanan-kery ilay fitakian'ireo fepetra ny tena mari-pamantarana ny tsirairay mampiasa aterineto. Saingy voamarina ankehitriny fa diso ireo karazana tombatombana ireo.
Omaly, araka ny fanambaràna iray avy amin'ny QQ.com, ilay lehibe indrindra amin'ny fanaovana tolotra Hafatra eo noho eo miaraka amin'ilay vokatra voalohany ao aminy nomena anarana hoe QQ, takiana amin'ireo mpitantana sy mpamorona ny vondrona QQ, fitaovana iray ahafahan'ireo mpampiasa maro mifampitafatafa amin'ny alàlan'ny rindrambaiko IM, ny hanomezan'izy ireo ny mombamomba azy manokana. Takian'ny Fitantanana ny Fiarovam-bahoaka eo ambany fiadidian'i ShenZhen ny fitsipika tahàka izany. Inty ny antontan-taratasy fanomezandalana. Mitovy tsy misy valaka amin'ny BBS kely iray ny QQ ary ireo mpampiasa izay manana famandrihana amin'io vondrona io irery ihany no afaka manoratra ny hafany ho an'ireo mpampiasa hafa ao amin'ny vondrona.
Nihetsika haingana tamin'ilay zava-nitranga ireo shinoa blaogera. WangYi, mpanao gazety miresaka ny IT no nilaza fa be loatra ny habetsahan'ireo vondrona ka tsy ho vita ny hanangona sy hikajy tsirairay ary tsy maintsy hihoatra izay takatry ny saina ny asa atao. Izy tenany fotsny dia manana kaonty QQ 8 ary namorona vondrona 4 isaky ny kaonty, noho izany ho areti'andoha ho azy hatreto ny hanoratra anarana ho an'ireo rehetra ireo.
Tsy mbola tena mazava tsara ny vokatra farany mikasika ireo fitsipika ireo, saingy azontsika iomanana koa ny fanarahamaso iray henjana kokoa ny aterineto ho apetraky ny governemanta shinoa amin'ny ho avy. Hanaraka akaiky ny zava-mitranga isika.